ch2ယောဟန်သည် – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / ယောဟန်၏ဧဝံဂေလိတရားကို / ch2ယောဟန်သည်
2:1 ထိုအခါသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌,awedding was held in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there.
2:2 Now Jesus was also invited to the wedding, တပညျ့တျောတို့နှင့်အတူ.
2:7 ယေရှုက, “Fill the water jars with water.” And they filled them to the very top.
2:8 ထိုအယေရှုက, “Now draw from it, and carry it to the chief steward of the feast.” And they took it to him.
2:9 ထိုအခါ, when the chief steward had tasted the water made into wine, since he did not know where it was from, for only the servants who had drawn the water knew, the chief steward called the groom,
2:10 သူကသူ့ကိုအားဆို၏: “Every man offers the good wine first, ပြီးတော့, when they have become inebriated, he offers what is worse. But you have kept the good wine until now.”
2:12 ထိုနောက်မှ, he descended to Capernaum, with his mother and his brothers and his disciples, but they did not remain there for many days.
2:13 ထိုအခါယုဒလူတို့၏ပသခါပွဲနီး, ဒါသညျယရှေုယေရုရှလင်မြို့သို့မတက်ပြီ.
2:14 ထိုမင်းသည်ကိုတွေ့, ဗိမာန်တော်၌ထိုင်လျက်, နွားနှင့်သိုးရောင်းသူနှင့်ချိုးငှက်, နှင့် moneychangers.
2:15 ထိုမင်းသည်အနည်းငယ်သာကြိုးတို့ထဲကတစ်ဦးနှင်တံနဲ့တူတစ်ခုခုလုပ်ပြီးမှ, သူသည်ဗိမာန်တော်ထဲကသူတို့အားလုံးကိုမောင်း, သိုးနဲ့နှားအပါအဝင်. သူသည်ထိုအ moneychangers ၏ကြေးဝါကိုဒင်္ဂါးကိုသွန်းလောင်း, သူကသူတို့ရဲ့စားပွဲမှောက်.
2:16 ထိုအချိုးရောင်းချနေခဲ့ကြသောသူတို့အဖို့, ဟုသူကပြောသည်: "ဒီမှာထဲကဤအရာတို့ကို ယူ., နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၏အိမျသို့ငါ့အဘ၏အိမျတျောကိုလုပ်မပေးပါဘူး။ "
2:17 အမှန်တကယ်, တပညျ့တျောတို့ကရေးထားသမျှသောသတိပေးခဲ့: "သင်၏အမျိုးအဘို့ဇွဲငါ့ကိုစားသုံး။ "
2:18 ထိုအခါယုဒလူတို့တုန့်ပြန်နှင့်ကလညျး, "ဘာနိမိတ်လက္ခဏာကိုသငျသညျအကြှနျုပျတို့အားဖျောပွနိုငျ, သငျသညျဤအရာတို့ကိုပြုစေခြင်းငှါ?"
2:19 ယရှေုသညျထိုသူတို့အားတုံ့ပြန်ဟု, "ဒီဗိမာနျတျောကိုဖွိုဖကျြ, သုံးရက်အတွင်းတွင်ငါပေါ်ထွန်းစေမည်။ "
2:20 ထိုအခါယုဒလူတို့ကဆိုသည်, "ဒီဗိမာန်တော်လေးဆယ်ခြောက်နှစ်ကျော်တက်ဆောကျခဲ့, သငျတို့သညျသုံးရကျကာလ၌ဆောကျမညျ?"
2:22 ထို့ကြောင့်, သူသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးမှ, တပညျ့တျောတို့သသူသည်ဤပြောပါတယ်ခဲ့ကွောငျးသတိပေးခဲ့, ထိုသူတို့သညျယရှေုစကားပြောခဲ့သောကမျြးစောငျ၌နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်.